Ny fizarana finday an'i Sony dia namela ny ankamaroan'ny tsena manerantany | Androidsis
Sony dia niady mafy teo amin'ny tsenan'ny smartphone nandritra ny taona vitsivitsy ary nanoratra fatiantoka mihoatra ny ampahefatra maro. Tamin'ny volana aprily lasa teo, Kenichiro Yoshida dia nandray ny toeran'ny CEO an'ny Sony ary nanambara a drafitra telo taona ho an'ny orinasa milaza fa miala amin'ny fitaovana famokarana ny orinasa.
Ankehitriny, amin'ny hetsika izay toa mifanaraka amin'io paikady io, Ny fizarana finday an'i Sony dia nihataka tamin'ny ankamaroan'ny tsenan'ny smartphone erak'izao tontolo izao. Ny antony lehibe mahatonga izany dia mino fa ny orinasa mifantoka amin'ny marika sy ny tombom-barotra.
Ilay hetsika, izay toa narahina taorian'ny FY2019 Corporate Strategy Meeting, dia inoana fa tafiditra ao anatin'ny drafitra maharitra mandritra ny 31 martsa 2019 ary natao hanampiana ny orinasa hampihena ny vidin'ny asa mba ahazoana tombony, informa Android Headlines.
Araka ny tatitra, ny orinasa japoney dia mikendry ny hampihena ny vidin'ny fandidiana farafaharatsiny farafaharatsinyampitahaina amin'ny 2017. Vokatr'io fihenam-bidy be io dia ny “faritra ifantohan'ny” sisa tavela amin'ilay orinasa dia i Japon, Taiwan ary Hong Kong, any Azia, ary koa i Eropa. Etazonia sy ny tapany avaratry ny kaontinanta Azia ankehitriny dia voasaron'ny fisarahana.
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, tamin'ny volana martsa, nikasa ny hanambatra ny fizarana finday amin'ireo fizarana hafa i Sony, izay misy ny fakantsary, ny fahitalavitra ary ny feo, hanohizany hamoaka tombony an-tapitrisany, ary tamin'ny fomba ofisialy no nanaovany izany. Ny fizarana vaovao dia antsoina hoe 'vokatra elektronika sy vahaolana' ary tokony hiteraka fifanakalozana teknolojia eo amin'ny vokatra ho avy.
Volana roa lasa izay dia voalaza fa Ny fizarana finday an'ny japoney teknolojia japoney dia handao ny antsasaky ny mpiasa ao anatin'ny herintaona. Sony Xperia, izay manana mpiasa 4.000, dia hahena ho mpiasa 2.000 manomboka izao ka hatramin'ny martsa 2020.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Tsy maharitra ny fatiantoka: ny fizarana finday an'i Sony dia nandao tamin'ny fomba ofisialy ny ankamaroan'ny tsena manerantany
Samsung dia manambara ny modely fakan-tsary optika 5x zoom zoom